Xalladda Mustaqbal ee Shirkadda Saab - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xalladda Mustaqbal ee Shirkadda Saab
Uppdaterat tisdag 26 april 2011 kl 16.55
Publicerat tisdag 26 april 2011 kl 09.13
Xaaladda mustaqbal ee shirkadda Saab
Shirkadda gawaarida ee saab oo ku sugan maalmo mustaqbalkeeda la go’aaminayo.
Muddo iminka saddex toddobaad ah ayey warshadda gawaarida Saab ee magaalada Trollhättan ay hoowlaheeda taagnaayeen, middaasina ugu wacnayd shirkadda oo aan dhaqaale u hayn ay ku fulisa. Suurtagalka keliya ee shirkadu leedahayna waxaa la sheegayaa in uu dhaqaale hor leh geliyo, waxna ku yeesho ra’sumaale Vladimir Antonov. Tallaabada ugu horeeysa ayaa ah in Antonov laga iibiyo guryaha shirkaddu ka hoowl-gasho ee magaalada Trollhättan. Waana heshiiska ganacsigaa midka uu bankiga miisaaniyad-gelinta ee Yurub uu jawaabta ka bixiyay khamiistii ina dhaaftay.
Hase yeeshee warar laga soo xigtay shirkadda Saab iyo dad ku dhow dhow Antonov-ba ay sheegeen in shuruudda lagu xiray shirkaddu tahay inay muddo 90 maalmood ah ku bixiso deyn dhan laba milyaard ee koronka iswiidhishka. Waa mid aan suurtagal ahayn, sida uu sheegay Lars Carlström:
- Xaaladda ay shirkaddu iminka ku sugan tahay mal aha suurtagal ay dhaqaalahaa ku bixiso.
Intaa waxaa dheer in bankigu sheegay in ganacsigan ay jawaab ka soo bixiso shirkadda gawaarida ee GM, horayna u lahaan jirtay Saab, illaa iminkana aan wax jawaab bankigu ka helin.
Maamulka dawladda Iswiidhen ayaa sheegay in dawladdu heshiiskan ganacsi ogolaatay, islamarkaana aanay jawaab hor leh middaa ka bixinayn. Sidoo kale waxay dawladdu ka gaabsatay codsi ugu yimid shirkadda Saab iney kulan wada qaataan, sida uu qoray war-geeyska maalinlaha magaalada Gothenborg ee GP.
Svenåke Berglie, ahna agaasimaha shirkadlayda soo saarta biraha baabuurtu ka kooban yahiin ayaa sheegay in xaaladdu ku cakiran tahay shirkadaha yar yar ee kuwaa qudhooda ay ganacsiga wadaagaan.
- Runtii, haddii aan jawaab degdeg ah la helin, waxay noola muuqataa in shirkado badani aanay wakhti intaa dhaafsiisan aanay sugi karin, maadama xaaladdu tahay mid aan la isku halayn karin, iyo inay awoodda howleed ku tashadaan, haddii middaasi timaadana waxaa dhaceeysa in qaar shaqaalaha ka mid ah ey shaqo ku waayayaan.